China mpanamboatra familiana mpamily sy mpamatsy | Sombiny fiara MBP
Ahoana no hiatrehana ny olana fa tsy afaka miverina amin'ny toerana mety azy ny kodiaran'ny kamio aorian'ny familiana?
Ny antony lehibe mahatonga ny kodiaran'ny fiara miverina ho azy amin'ny toerana marina aorian'ny familiana dia ny fametrahana ny kodiarana no mitana andraikitra lehibe. Ny caster kingpin sy ny fironana kingpin dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famerenana mandeha ho azy ny familiana.
Ny vokatry ny marina ny caster kingpin dia mifandraika amin'ny hafainganam-pandehan'ny fiara, raha ny vokatry ny marina ny caster kingpin dia saika tsy miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny fiara. Noho izany, rehefa mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha ny fiara dia ny vokatry ny fihenan'ny lamosina mankany aoriana dia lehibe kokoa noho ny mihodina ao anaty amin'ny hafainganam-pandeha ambany.
Ankoatr'izay, rehefa mihodina ny familiana dia misy fiantraikany tsindraindray rehefa mitondra amina tsipika mahitsy, dia mitana andraikitra tsara koa ny fironana.
Noho ny fahafantarana an'io fitsipika io dia andao hofakafakaina ny antony tsy hiverenan'ny familiana amin'ny kamio irery irery amin'ny toerana mety. Azo antoka fa misy ny tsy mety amin'ny fampifanarahana ny familiana amin'ny kamio.
Ka inona avy ireo anton-javatra hanova ny fampifanarahana familiana? Ny lesoka mahazatra dia: ny fiaran'ny fiaramanidina ny paingotra volo dia simba, ny lava-tànana amin'ny volombava dia tonta be (izany hoe tapaka ny "volo mitsangana"), malalaka na simba ny familiana, ary ny knuckle dia kilemaina
Ho fanampin'izany, ny vaky tsipìka vaky aloha, visy afovoany vaky, volo mitaingina be loatra, vatan-tsipika tapaka, sns. Dia hitarika ny fampifanarahana ny famaky aloha, ary hovaina ny fampifanarahana amin'ny familiana manontolo, ka tsy ho afaka hiverina ho azy ny toerana mety. Mila esorina sy amboarina ireo lesoka ireo.
Ny mety hafa dia ny bearings sy ny tanany ny pin knuckle sy ny lohan'ny familiana dia nohosorana ratsy, izay mitarika amin'ny fanoherana tafahoatra ny familiana ny familiana, ary io toe-javatra io koa dia mitarika amin'ny tsy fahombiazan'ny familiana amin'ny familiana. Amin'ity fotoana ity, hosory fotsiny ireo faritra ireo. Tsara homarihina fa rehefa diberesiny ireo faritra ireo dia tokony tohana ny kodiarana raha tsy izany dia tsy hiditra ny dibera.
Teo aloha: FUWA Fizarana amerikana ampahany lehibe amin'ny axles
Manaraka: fitaovana fitifirana jost